Zimbabwe ruling, opposition parties sign power-sharing deal - Thaindian News
Zimbabwe ruling, opposition parties sign power-sharing deal
September 15th, 2008 - 5:09 pm ICT by IANS Tweet
Harare, Sep 15 (Xinhua) Zimbabwe’s ruling party and the opposition formally signed here Monday a power-sharing deal which is aimed at solving the political and economic crisis in the country. The deal was signed by President Robert Mugabe who headed the ruling ZANU-PF party and opposition leaders in the Zimbabwean capital.
Mugabe and the main opposition Movement for Democratic Change (MDC) led by Morgan Tsvangirai reached the power-sharing deal last Thursday.
Under the deal, the new Zimbabwean cabinet will comprise 31 members, 16 of them drawn from the opposition.
The deal at the end of long-drawn on-again, off-again talks came after Mugabe issued an ultimatum earlier that he would go ahead unilaterally with naming cabinet ministers if Tsvangirai did not sign the power-sharing agreement by last Thursday.
Tags: cabinet ministers, democratic change, economic crisis, last thursday, morgan tsvangirai, opposition leaders, opposition movement, opposition parties, parliamentary elections, president robert mugabe, presidential candidate, robert mugabe, ruling party, ultimatum, xinhua, zanu pf, zimbabwe, zimbabwean